Norway oo Danjiraheeda Turkiga ugu yeertay in 24 saac gudaheeda kusoo galo dalka (Sababta) - Hablaha Media Network
Norway oo Danjiraheeda Turkiga ugu yeertay in 24 saac gudaheeda kusoo galo dalka (Sababta)
HMN:- Dowlada Norway ayaa 24 gudaheeda ugu yeertay Danjiraha u fadhiya dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbuul.
Warbixin kasoo baxday Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee dalka Norway, ayaa lagu sheegay Wasaaradu ay si dhaqsi ah ugu yeertay Danjirihii u fadhiyay Istanbuul.
Wasaarada ayaa sheegtay in Danjiraha laga doonaayo in muddo 24saac gudaheeda Danjiraha looga baahan yahay inuu kusoo gaaro dalka Norway.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee dalka Turkiga ayaa dhankiisa ka xaqiijiyay in Norway ay la baxday Danjirihii ka joogay dalka Turkiga.
Arrintan ayaa timid, kadib, markii ay Koox ka tirsan Saraakiisha Milliteriga Turkishka ee saldhigooda ku yaallo dalka Norway diideen inay dib ugu soo laabtaan dalkooda hooyo, kuwaasi oo lala xiriirinayo Afgembigii Fashilmay.
Xiisada ayaa sii xoogeysatay kadib markii Dowladda Norway ay maalinimadii shalay u oggolaatay magangelyo-siyaasadeed oo ay ku joogi karaan dalkaasi.
Docda kale, Dowlada Turkiga wali ma aysan qaadin tallaabo looga jawaabayo go’aanka ay Dowlada Norway Turkiga kala baxday Danjiraheeda.